Ikhosi ye-ETABS yoBunjineli boLwakhiwo-Inqanaba 1 -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi ye-ETABS yoBunjineli boLwakhiwo-Inqanaba 1
Uhlalutyo kunye noyilo lwezakhiwo - Inqanaba zero kwinqanaba eliphezulu.
Injongo yale khosi kukubonelela umthathi-nxaxheba ngezixhobo ezisisiseko kunye neziphambili zenkqubo yokumodela, ayizukufikelelwa kuphela kuyilo lwezinto zokwakha zesakhiwo, kodwa nesakhiwo siya kuhlaziywa ngokusekwe kwizicwangciso ezineenkcukacha, kusetyenziswa isixhobo enamandla kakhulu kwintengiso kuphuhliso lweeprojekthi zesoftware CSI I-ETABS Ultimate 17.0.1
Kule projekthi, ukubalwa kwesakhiwo esikwinqanaba le-8 sokusetyenziswa kohlobo lwezindlu kuya kwenziwa, ngokubandakanya izinyuko kwimodeli, ilifti, kunye neendonga zokucheba, eyona nto kugxilwe kuyo kule khosi.
Amaspredishithi angaphakathi esoftware aya kuchazwa ngokweenkcukacha CSI I-ETABS Ultimate 17.0.1. Kuxhomekeke kwimigaqo I-ACI 318-14. Izinto ezichaziweyo zolwakhiwo (iiNdonga zokuSika) ziya kufikelelwa kwi isoftwe I-AUTOCAD.
Baza kukwazi ukwenza iprojekthi yeZakhiwo eziSiseko seSusism kwiiNdonga zokuSika
Ukuqiniswa ngokweenkcukacha kwiindonga zokusika
Ulwazi olusisiseko ngokukodwa, okanye sele uyibonile ikhosi: Ubungcali boBunjineli boLwakhiwo nge-ETABS 2016.2.0
Le khosi ikwafumaneka ngeSpanish